के तपाईको भुल्ने बानी छ, अव चिन्ता नलिनुहोस्, यसरी ठिक पार्नुहोस्
अगस्ट 2, 2019 अगस्ट 2, 2019 साइन्स इन्फोटेक0Comments डा. राम बहादुर बोहरा, भुल्ने बानी
मानिस सामाजिक प्राणी भएकोले दैनिक थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने हुन सक्छ । भुल्ने बानी हावी भएमा कहिलेकाही ठूलो समस्या आइलाग्न सक्छ । हाम्रो समाजमा यस्ता अनेकौं व्यक्तिहरू भुल्ने बानीका कारण परेसानी भएका थुप्रै घटना देख्न र सुन्न सकिन्छ ।
आज हामीले अल्जाइमर जस्ता खतरनाक बिमारीबाट आफुलाई कसरी बचाउन सकिन्छ र के कस्ता वस्तु खानाले यस्तो समस्या हल हुन सक्छ भन्नेबारे प्रकाश पार्नेछौं । हामीलाई साना-साना कुरा बिर्सनबाट रोक्न हाम्रो भान्सामा उपलब्ध हुने र खोजेको बेला भेटाउन सकिने खानाको बारेमा आज यहाँ जानकारी दिने प्रयत्न गर्दैछौं ।
आज विद्यार्थी हुन या प्रोफेसर हुन या वकिल हुन भुल्ने बानीलाई सुधार्न नसके ठूलो कठिनाइ हुन सक्छ । बच्चा जब स्कुल पढ्न पठाउछौं त्यतिबेला बच्चाको मेमोरी कति छ भन्नेबारे हामीले चासो लिएका हुदैनौ, यसले हामीलाई त फरक नपर्ला तर त्यो बच्चालाई अवश्य पर्न सक्छ । यस्तो समस्या हल गर्न तल केहि भान्सामा प्राप्त गर्ने बस्तुबारे जानकारी दिन लागेका छौ । यस्तो जानकारी अरूलाई पनि सेयर गरेर पुन्य कमाउन हामी आग्रह गर्दछौं ।
भुल्ने बानी हुनेले खानुपर्ने कुराहरु
१. गोलभेडामा लाइकोपीन हुन्छ जसले शरीरको फ्रि रेडिकल्सको रक्षा गर्छ र साथमा दिमागको सेल्सलाई बिग्रनबाट बचाउछ र दिमाग स्वस्थ बनाउछ ।
२. दहीमा क्याल्सियम, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेड, खनिज, लबण र फोस्फोरस पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । दहीको नियमित सेवनले सम्झने शक्ति बढाउछ । यसमा अमिनो एसिड पाइन्छ जसले दिमागी तनावलाई भगाउन मद्दत गर्छ ।
३. जाईफलमा यस्तो तत्व हुन्छ जसले दिमागलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ । जसले सम्झिने शक्तिलाई बढाउछ ।
४. तुलसी कयौं रोगको औषधीको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । दिनहुँ २-४ पत्ताको सेवनले बिर्सने रोगबाट पनि छुट्कारा पाउन सकिन्छ ।
५. अल्जाइमरको लागि दालचिनी एक महत्वपुर्ण औषधी हो । यसको नियमित सेवनले सम्झिने शक्ति बढ्छ र दिमाग स्वस्थ रहन्छ ।
← जीवनमा सुखी रहन यी ४ काम कहिल्यै पनि नछोड्नुस् अधुरो
यस्ता छन् लामो आयु बाँच्ने १५ उपायहरु, जानी राखौ →